Ekike a na -ahụkarị nke Oaxaca | Akụkọ njem
Ekike dị iche iche sitere na Oaxaca
Mariela Carril | 26/08/2021 17:00 | Emelitere ka 27/08/2021 23:21 | omenala, Mexico
na ekike ejije ha na -akọwa omenala, ọdịnala, ihe niile metụtara ala na ndị obodo ya, omenala ya, okpukperechi ya, nri afọ ya, egwu ya. Anyị nwere ike ịga n'ihu ka oge na -aga, gbakwunye ọganihu, ihe mepụtara, nke afọ na -atụ na mba dị iche iche, mana ụdị ejiji ga -adị mgbe niile iji chetara anyị oge gara aga, mmalite, akụkọ ihe mere eme. Onye anyị bụ na ebe anyị si.
Ọ bụ ya mere na anaghị enwekarị otu ụdị ejiji ọzọ, n'ihe banyere taa, anyị na -ahụ ọtụtụ ụdị nke ụdị ejiji Oaxaca.
2 Ekike dị iche iche sitere na Oaxaca
Na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ Mexico bụ steeti Oaxaca, saịtị nwere nnukwu ụmụ amaala. N'ezie, enwere agbụrụ 16 na ọ bụ ihe ijuanya na ọtụtụ omenala ha ka dị.
Ugwu, osimiri, ọgba, ọgba, ihe a niile na -egosipụta ọdịdị ala ya. Ọ bụ ala nke ihu igwe dị iche iche nwere yana a nnukwu ihe di iche-iche. N'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụmụ amaala ya na ọchịchị Spanish ọ bụ ala okpukpe syncretism.
Oaxaca na -eme ndị nsọ niile, mana mmemme kacha mma bụ nke Disemba 18, oriri nnabata nke Virgen de la Soledad. N'ụzọ doro anya, enwere ụmụ agbọghọ ndị ọzọ na -eme ememme.
Otu n'ime uwe ndị kachasị ewu ewu na Oaxaca bụ nke Tehuana, ụdị ahụ onye na -ese ihe mere ka amara nke ọma Frida khalo. Ọ bụ ejiji nwanyị nke agbụrụ Zapotec, ndị mmadụ bi n'ime ime obodo Tehuanpetec. Ọ bụ ebe a ka uwe ahụ si malite, nke mechara gbasaa ojiji ya, a na -ahụkwa ya n'ọtụtụ ememme taa, n'agbanyeghị oge gafere na mgbanwe ọ na -eme mgbe niile.
Enwere uwe kwa ụbọchị: mejupụtara rabona, uwe mwụda dị ogologo, nwere ihe mkpuchi ma jiri akwa ọ bụla mee ya. Enwere a ụdịdị mara mma karịa nke a na -etinye olán ọcha nke akwa ọzọ. Kedu ka a uwe mwụda ọkara edozi isi na -aghọ ihe dị mkpa. Ọ bụrụ na nwanyị ahụ lụrụ nwanyị, ọ na -eji lace ndu ifuru n'aka nri ma ọ bụrụ na ọ lụghị nwanyị mana na -achọ di, n'akụkụ aka ekpe.
La ụdị gala kwesịrị ekwesị enweworị ọla ntị, petticoat na kpochapụwo huipil nke anyị na -ahụ n'ọtụtụ mba Latin America. A na -eyi ntutu isi na braids nwere ụta na mkpụrụ ego n'isi. Huipil buru ibu ma enwere ike eyi ya n'ụzọ abụọ: a na -eji akụkụ pere mpe eme ememme, a na -ejikwa akụkụ ka ukwuu maka ije ma ọ bụ ịgba egwu. Enwere ụdị ọzọ kadị nụchaa nke amara dị ka Onye nlekọta nke onye nlekọta ebe enwere irighiri ikpuru ejiri ọla edo mee nke ahụ pụtara n'oge Porfirio Díaz.
Mgbe e mesịrị, na mpaghara ndịda nke ndagwurugwu etiti nke steeti, ihe a na-akpọ ejiji chenteña. Ngwakọta nke ụmụ amaala na nke ndị ọchịchị, ebe a anyị nwere uwe mwụda ejiri aka mee nke mara mma, yana uwe elu akwa a kpara nke ọma n'ihu, nke ka njọ na akwa ojii.
N'obodo Coyopetec, na Ndagwurugwu Oaxaca, ejiji coyotepec. Ihe nchacha ahụ bụ oji wee kechie isi ya dị ka akwa.
N'akụkụ nke ya, na Sierra Mazateca, huipil nwere ihe mkpuchi ihu n'ihu ya nwere obe nwere agba mara mma nke ukwuu. Ihe a na -eji akpa akpa bụ okooko osisi na nnụnụ. Enwekwara mpe mpe akwa pink na turquoise. N'ala ala huipil bụ akwa mkpuchi nwere ihe ịchọ mma na -acha ọbara ọbara. Ụmụ nwanyị na -eji ntutu isi abụọ akpụ isi ha ma mgbe ha na -agba egwu, ha na -eme ya na ogiri n'aka nke jupụtara na okooko osisi nke ha tụfuru.
Ejiji ọzọ mara mma nke mara mma bụ Ejiji malacatera sitere na Jamiltepec. A na -akpọ ya n'ihi na onye ọ bụla nke na -eme ya na -eji winch na -akpa owu. Ọ na -acha odo odo na -acha ọbara ọbara na ụmụ agbọghọ na -eyi chongos n'isi ebe a na -etinye agịga winch.
Na ụsọ oké osimiri nke Tehuanteepec Ndị agbụrụ Huave bi. Ọ na -ekpo ọkụ n'ezie ebe a kpochapụwo huipil bụ ọkụ, Uwe mwụda ahụ dị ogologo ma bipụta ya na ifuru ma ha nwere tangle uhie. N'ebe dị anya n'oké osimiri, Na Sierra Mixteca, e nwere uwe Triqui. N'ebe a, huipil dị ogologo na -acha ọbara ọbara ma nwee ọtụtụ ihe ịcha mma. Ụmụ nwanyị ahụ na -akpa ntutu ha ka ọ bụrụ otu braid nke ejiri mbo mara mma, na ọtụtụ olu olu mara mma na -akwụdo n'olu ha.
Ka ọ dị ugbu a, anyị akpọwo ụfọdụ n'ime ọtụtụ ụdị ejiji Oaxaca enwere, mana ha niile bụ maka ụmụ nwanyị. Kedu maka uwe nwoke nwoke si Oaxaca? Ọ dị mma, enwerekwa ọtụtụ, mana o doro anya na ọ bụ maka uwe dị mfe. Ọ na -abụkarị mkpụmkpụ, uwe elu, akpụkpọ ụkwụ, mgbe ụfọdụ ajị anụ ma ọ bụ okpu nkwụ.
Nke bụ eziokwu bụ na n'agbanyeghị ọtụtụ ekike n'ozuzu, a na -echekwa ihe na -emekarị: huipil. Ọ dị mkpụmkpụ, ogologo, karịa akwa, enweghị akwa, yana ọ nwere ọtụtụ ojiji n'ihi na ọ bụ maka ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ maka ihe omume ka njọ dịka agbamakwụkwọ ma ọ bụ olili ozu. ee, ọ na -agbawanye agba na nnọkọ oriri ebe a na -agba egwu.
Echere m na nke ọ bụla n'ime uwe ndị a bụ ode na agba na egwuregwu. Ha magburu onwe ya na ịhụ ha na ogbo, n'ịgba egwu na ememme, bụ ihe na -atọ ụtọ n'anya. N'ụzọ doro anya, ọ bụrụ na ị kpebie ịga njem na Mexico, ịzụta huipil na -abụkarị ebe nchekwa dị mma maka ihe omume gị. Ncheta dị mma na uwe nke ga -ezuru anya niile n'ụzọ ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » Ekike dị iche iche sitere na Oaxaca
Ekike a na -ahụkarị nke mpaghara Andean
Chiapas ụdị ejiji